Home » Lahatsoratra farany farany » fivoriana » Business deals power ny andro faharoan'ny IMEX America
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Tombontsoa ara-barotra roa manery ny famoahana farany an'ny IMEX America, izay atao any Las Vegas amin'izao fotoana izao.
Ny gorodona fampisehoana no toerana hanaovana fandraharahana mampientam-po.
Ny fianarana tao amin'ny seho dia natomboka tamin'ny alàlan'ny fanamafisam-peo mavitrika izay nandrisika ny mpanatrika ho 'tsy misy dikany'.
Ny fandaharana feno amin'ny fampianarana (200+ sessions) an'ny seho dia tena manintona ihany koa.
"Ny maha-eto ahy dia manome tombony ahy amin'ny maha-ambony ny lalaoko sy afaka manome serivisy tsara kokoa ho an'ny mpanjifako." Linda Lawson, mpividy nampiantrano, avy ao amin'ny Achieve Incentives & Meetings any Ohio, dia mamintina ny tombontsoa ara-barotra roa manery ny fanontana farany Amerika IMEX, atao any Las Vegas amin'izao fotoana izao.
Ny gorodona fampisehoana dia toerana ho an'ny fandraharahana mampientam-po toa an'i Andrew Swanston, Lehiben'ny varotra, fihaonambe & hetsika ao amin'ny Excel London, dia manazava hoe: “Nahafinaritra ny andronay omaly. Mpanjifa iray izay nanangananay fifandraisana nandritra ny 10 taona mahery no nofidiana Amerika IMEX ho toerana hanamafisana hetsika solontena 6,000 ho an'ny fikambanana ara-pitsaboana iraisam-pirenena amin'ny 2022 - ny fampisehoana no fotoana tsara indrindra hihaonana mivantana sy hanao sonia ny fifanarahana. "
Avy amin'ny 'kilema' ka hatramin'ny flexibilité
Ny fianarana tao amin'ny seho dia natomboka tamin'ny alàlan'ny fanamafisam-peo mavitrika izay nandrisika ny mpanatrika ho 'tsy misy dikany'. Ao amin'ny fitarihana nomerika: Ny fahazarana dimy amin'ny fahombiazana sy ny fahasambarana ao amin'ny mpanoratra malaza indrindra eran'izao tontolo izao miovaova be sady mpandahateny mandrisika Erik Qualman dia niresaka momba ny nahatonga ny flexibilité ho iray amin'ireo 'hery lehibe vaovao', indrindra tato anatin'ny roa taona lasa: ny alehanao, fa miovaova amin'ny lalanao”, hoy izy nanoro hevitra. Niresaka momba ny fomba fiatrehana ny 'data, fanelingelenana ary fanelingelenana' hanomanana paikady nomerika ho an'ny hetsika iray izay manome firotsahana marina ny mpampianatra nomerika: “Atombohy amin'ny tsiky. Eritrereto hoe inona no hanome tsiky ho an'ny mpanjifanao ary hiverenanao avy eo. "
Noresahina tao amin'ny Let's end discrimination demographic, David Allison, mpanorina ny Valuegraphics, ny fandraisan'anjaran'ny hetsika amin'ny alàlan'ny fandrotsahana demografika, ilay angona voalohany eran-tany noforonina manokana mba hanampiana ireo fikambanana haminavina sy hitarika ny fitondran-tena amin'ny fampiasana ny soatoavina ifampizaràntsika. "Ny demografika dia mamaritra hoe inona ny olona, ​​​​fa tsy ny fomba handraisana azy ireo," hoy izy. Any amin'ny faritra rehetra eran'izao tontolo izao, ny soatoavina ambony indrindra ikarakaran'ny olona dia ny Fianakaviana, ny Fianakaviana, ny Fifandraisana, ny Finamana ary ny Fiaraha-monina – Nizara ny fomba fampiasana ireo soatoavina tena ilaina ireo i David mba hampitana hafatra fototra.
Amerika IMEX atao ao amin’ny Helodranon’i Mandalay hatramin’ny 11 novambra izao.